I-Realme 9, ilungisa ixabiso lokulwa noluhlu oluphakathi [Uphononongo] | Izixhobo zeNdaba
I-Realme 9, ilungisa ixabiso ukulwa noluhlu oluphakathi [Jonga]
UMiguel Hernandez | 21/05/2022 18:48 | ngokubanzi, Reviews
I-Realme yenye yeebrendi ze-smartphone ezikhule kakhulu kwiinyanga zamva nje eSpain naseMzantsi Melika inike idabi layo lokubonelela ngeemveliso ezinexabiso elilungileyo lemali, kwaye ayinakuba ncinci ngokongezwa kwayo, iRealme 9.
Sihlalutya iRealme 9 entsha, isixhobo esijonge ukulawula kuluhlu oluphakathi ngexabiso elifanelekileyo kunye neenkcukacha ezilungileyo. Fumana nathi zonke iindaba malunga nesi sixhobo, uvavanyo lwethu lwekhamera, ukusebenza kunye nokunye okuninzi, njengesiqhelo, uhlalutyo olunyanisekileyo apho sikubonisa khona isixhobo ukuze uzenzele isigqibo sokuba kufanelekile okanye akunjalo.
1 Uyilo kunye nezixhobo
4 Icandelo lezithombe
Uyilo kunye nezixhobo
Njengesiqhelo iRealme, isixhobo ngokubanzi senziwe ngeplastiki, ngaphandle kwesikrini, ewe. Inoyilo lwangemva lwekhamera olusikhumbuza ngokuqinisekileyo ezinye izixhobo zohlobo, ngeli xesha ikhamera kathathu eya kuthatha indawo enkulu engasemva.
Kwinxalenye yayo, le ndawo yangasemva inoyilo holographic wavy, sele sisazi ukuba iRealme iyathanda ukutsala umdla kulo mba, nakuwo ii-bezels ezisicaba ngokupheleleyo, njengoko ifashoni iyalela okwangoku.
Ubungakanani: Ubukhulu: 160 x 73,3 x 7,99 mm
Ubunzima: I-178 gram
Imibala: Igolide yeDune; I-Interstellar White; imeteorite emnyama
Isixhobo silula (ngenxa yeplastiki) kwaye sincinci ngokuqwalasela abanduleli baso, okungaqhelekanga ngokuqwalasela ibhetri enkulu ngaphakathi. Kwinxalenye yayo, sinenxalenye yangaphambili kunye ne-burr kwindawo ephantsi (i-bezel encinci), isithethi esakhelwe kwi-bezel ephezulu ukwenza uninzi lwesikrini, kunye nekhamera ye-"freckle" -style selfie kwikona ephezulu ngasekhohlo.
Imixholo yebhokisi eyongezelelweyo:
33W Itshaja yeDart
Amaqhosha evolumu kunye ne-SIM tray ahlala kwiprofayile esekhohlo, ngelixa ekunene sineqhosha lamandla. Inxalenye esezantsi yesithethi, i-USB-C kwaye ngokuqinisekileyo i-3,5mm Jack ukuba iRealme ayigqibi ukukhanyela ukuba ibambelele kolu zuko lwangaphambili. Ewe kunjalo, bathathe isigqibo sokungazifaki ii-headphones...
Ukubheja kweRealme 9 kokwaziwayo I-Qualcomm Snapdragon 680, enikezelwa ngokwahlukileyo kwi-6GB okanye i-8GB ye-RAM ekukhetheni komthengi, ngoyena unomthamo omkhulu lowo siye sawuhlalutya. Kwelakhe icala, sine-128GB yokugcina i-USF 2.2 Nangona inesantya esamkelekileyo, ayigqamanga ngokuba yeyona iphambili kwimarike. Ngokuphathelele inkumbulo, oku kunokwandiswa nge-microSD ukuya kuthi ga kwi-256GB.
Iscreen sensor yeminwe
I-Corning i-Gorilla Glass i-5
I-6nm ezisibhozo-core processor iya kukhatshwa yi Adreno 610 GPU ukusebenza kwemizobo, into ekufuneka uyibulele ngokusebenza kwayo okungqiniweyo kunye nokusebenza kwayo. Okwangoku kwaye njengoko unokucinga, ezi ziinketho zokuqhagamshelwa kweRealme 9:
Ukuhambisa izixhobo Sine-Android 12 phantsi kwe-Realme UI 3.0 umaleko wokwenza ngokwezifiso, esele sithetha ngawo ngobude. Amava alungileyo, uyilo olukhanyayo kunye nokusebenza kokukhanya okujongelwa phantsi ngokufakwa kwe "adware", izicelo ezifakwe ngaphambili esingazithandiyo kwaphela.
Sinephaneli yeSuperAMOLED eyenziwe yiSamsung ngobukhulu be-6,4 ″ ethatha ithuba elingaphambili kakuhle. Isinika isisombululo se-FullHD + (1080 * 2400) kunye nezinga lokuhlaziya eliphakathi le-90Hz elixatyisiweyo. Isantya sesampulu sokuchukumisa sifikelela kwi-360Hz, ewe. Unikezelo Incapha yokukhanya ukuya kuthi ga kwi-1.000 nits eyenze ukuba kube lula ukuyisebenzisa ngaphandle kwaye nangona ingaboniswanga, ndiyaqonda (kwaye ndiyaqinisekisa) ukuba inamandla okubonelela ngomxholo we-HDR.
Ibhetri, okwangoku, "inkulu". Sine-5.000 mAh, Nangona sithetha ngokugqithisileyo, ngokwelizwi iya kuwela kwi-4.880 mAh, nayo ininzi. Sine a itshaja ekhawulezayo ukuya kuthi ga kwi-33W efakwe kwiphakheji. Oku kuyahambelana nenkqubo yokutshaja umva nge-USB-C.
Siqaphele ukuba mhlawumbi kuya kushushu kancinci ukuba siyayifuna ngemidlalo yevidiyo, kodwa ukuzimela kulungile, ndingatsho ukuba kuyaphawuleka, kuya kukukhapha ngokulula ngaphezulu kosuku lokusetyenziswa kwaye kula maxesha kuyaxatyiswa. .
Imodyuli yeefoto iya kubonelela ngazo zonke ezi ndlela zilandelayo:
Ikhamera ye-108MP Pro yokukhanya nge-Samsung HM6 sensor ene-f/1,75 aperture kunye ne-lens ye-6P
Super Wide engile Camera I-120º kunye ne-8MP iyonke, i-lens ye-5P ene-f / 2.2 yokuvula
ikhamera enkulu I-4cm kunye ne-2MP, i-lens ye-3P kunye ne-f / 2.4 yokuvula
Ividiyo ayinayo ukuzinza kwe-optical, kodwa idijithali isebenza ngokwaneleyo ngokuqwalasela ixabiso lesixhobo. Ukurekhoda kubandezeleka kakhulu xa ukukhanya kwendalo kwehla, kwaye nangona kukho amazinga angcono, Asiyicebisi ukuyisebenzisa ngasentla kwe-1080p/60FPS ngeziphumo ezilungileyo.
sinazo ezi iindlela Ukufota okudityanisiweyo kwisicelo:
Ngokubhekisele kwikhamera yangaphambili, Sine-sensor ye-16MP ene-78º intsimi yokujonga ethatha izithonga ezilungileyo ngokuqwalasela i-f/2.4 yokuvuleka kwayo.
Ngamafutshane, kwaye rhoqo kusenzeka kwezinye iimeko, yeyona sensor iphambili ekhanya ngokukhanya kwayo phantse kuzo zonke iimvavanyo, ngelixa i-Wide Angle ithotyelwe kwiimeko ezifanelekileyo zokukhanyisa kunye ne-macro, kakuhle i-macro ayisetyenziswanga nabani na.
Le Realme 9 ifikelela kwimarike ngamaxabiso phakathi I-249,99 kunye ne-279,99 euros kuxhomekeke kukhetho olukhethiweyo ngokwe-RAM (6GB / 8GB), kunye neempawu zobuchwepheshe ezigxininise kwizinto eziyimfuneko, ngaphandle kwe-5G kodwa kunye ne-GPU enhle kunye neprosesa eyaziwayo, ehamba kunye neyona nto iyimfuneko, ibhetri enhle.
Ngokwenxalenye yabo, iikhamera ziyaqhubeka zihambelana nexabiso esilihlawulayo kwisixhobo, kunye nezivamvo ezisivumela ukuba sidlale kodwa singenzi umlingo.
Ithunyelwe nge: Meyi 21 ye2022
Utshintsho lokugqibela: Meyi 21 ye2022
I-Adware ikwimo yee-apps
Ubuncinci i-sensor ye-macro ishiywe
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Realme 9, ilungisa ixabiso ukulwa noluhlu oluphakathi [Jonga]
I-FlashLED V16, ukhuseleko ngakumbi kunye nentuthuzelo ngakumbi [Jonga]